Oduu Garee Shanee ABO; GareeCommander Tesfaye, who ordered the Kofale Massacre, was killed by OLA - Bilisummaa
Posted by: bilisummaa August 17, 2013
About bilisummaa Previous: Ka sirbu ni sirba….
Next: Metcha and Tulema on OSA Forum
One comment lencho August 18, 2013 at 1:42 am Maaliif Kijiba hojii umurii guutuu godhatan? Harras ummani Oromo ni sobama jettani yaadu miti? baayyee nama gaddisiiftu. Mee dubbii kijibaa ta’u barreffamuma keessan irraayuu haa mirkaneefannu. KAN MATA DUREE irratti nuun jettan Ajjeefame isa jedhuudha gadi buutani immoo Jaarmanitti yaalamutti jiraa jettan. Reeffa yaalutti jirani moo awwaalaaf achi fidan?
Duuli duguugiisa shanyii kan qaccee dhaloota Oromoo fuulleeyfate ammaas bifa haarayaan itti fufe VIVA…. Obboo Mohamed Adeemoo fii Johar Mohamed..Oromoon isiniin boona Oromo refugee’s performing at the Nairobi University on Refugee Day 20th June.. Oromo refugee's performing at the Nairobi University on Refugee Day 20th June..
afaan oromoo Duuli duguugiisa shanyii kan qaccee dhaloota Oromoo fuulleeyfate ammaas bifa haarayaan geggeeyfamaati jira.